Roandà: Bilaogera nanasa Filoha tamin’ny alalan’ny Tweeter · Global Voices teny Malagasy
Roandà: Bilaogera nanasa Filoha tamin'ny alalan'ny Tweeter
Voadika ny 11 Marsa 2011 5:10 GMT
Ity dia tantara milaza ny fanasana nataona bilaogera Kenyana iray mipetraka ao Roandà ny Filoha Roandey Paul Kagame tamin'ny alalan'ny Twitter mba hamangy ny ankizy ao amin'ny kianjan'ny Tennis Ibirunga ao an-tanànan'i Musanze. Namaly ny antso ny Filoha Kagame ary dia niafara tamin'ny famangiana azy ireo izany.
Miara miasa amin'ny Art de Conservation i Savy Kenia, fikambanana izay manatanteraka ny fiarovana sy fampianarana momba ny fahasalamana ho an'ny ankizy monina ao akaikin'ny Saha Nasionaly ny Volkano ao Rwanda.
Ankizy avy amin'ny Tennis Club an-tanànan'i Musante ireto. Maniry hahita anao izahay eo amin'ny kianjan'ny tennis-nay
Raha handalo ny tanànan'i Musanze ianao ity tolakandro ity dia hanofahofa tanana anao ny ankizy mpilalao tennis ary manana t-shirt ho anao.
Nanazava i SavyKenya nanao ahoana ny fiatombohany:
Nanomboka tao amin'ny tweet izany rehetra izany.Eo amin'ny tweets roa eo.
Ny zoma maraina. Ny andro niasako farany. Andron'ny fahamorana ny andro zoma aty, mandeha miasa izahay amin'ny 9 ora maraina, ary amin'ny ankapobeny, dia be torimaso hatramin'ny 8.30 maraina aho, avy eo mandro, miakanjo, ary mihinana sakafo maraina ary mandeha tongotra 10 minitra rehefa ho any am-piasana hiasa mandritra ny 30minitra. Androany teo amin'ny 4 ora hariva, nisy fety fanaovam-beloma ho ahy. Ka dia tsy nisy asa betsaka nataoko, koa dia nolaniako ny maraina nanaovana tweet, Facebok, namaky bolongana sy nandefa mailaka.
Tafaverina ao amin'ny birao aho, nilaza ahy i Julie momba ny fandalovan'ny Filoha androany ary novaliako izy hoe fantatrao ve? Ato amin'ny twitter ny Filoha, afaka mi-tweet miaraka aminy aho. Ka hoy i Julie hoe, Ataovy ary?
Ka dia ni-tweet taminy aho, ary nandinika ny valinteniko isaky ny minitra vitsy izy. Farany, 30 minitra taty aoriana, dia nahazo valiny aho:
@PaulKagame Raha handalo ny tanànan'i Musanze ianao ity tolakandro ity dia hanofahofa tanana anao ny ankizy mpilalao tennis ary manana t-shirt ho anao izy ireo.
Namaly i Kagame:
@savvykenya. Eny,…hijanona aho …misaotra anao!
Nanomboka ny fiandrasana:
Ankoatra ny tweet nalefany, mientanentana ny ankizy mpilalao tennis izay nilazana mba hiakanjo ny t-shirt-n'ny klioba tsara indrindra, kely ny herijika hoe hijanona eo tokoa ny Filoha. Fa manodidina ny amin'ny 5 ora hariva, niantso sy nanomboka nanadihady momba ny klioba ny kaomisera tao an-tanàna. Araka izany, fantatray fa miha-mazava ny raharaha. Fotoana fohy aty aoriana, mpiambina lehilahy vitsivitsy (angamba sasantsasany amin'ireo mpiambina ny Filoha) no tonga ary nametraka fanontaniana ihany koa. Tsy maintsy nandao ny lanonana izahay (mpitantana ny AoC) hamonjy ny kianja filalaovana tennis. Nilaza ny vahiny izahay mba tsy hitebiteby, fa mbola hiverina izahay hanohy ny fety fa amin'izao fotoana izao, dia…
Miaramila maromaro indray no tonga. Mihodidina ny kianjan'ny tennis ary mifangaro ao anaty aloka . Nankao amin'ny trano mifanakaiky ny kianja izy ireo ary nangataka ny mponina mba hijanona ao anaty trano. Toy ny lahatsary avokoa no miseho. Mametraka fanontaniana izy ireo. Mahalala fomba, satria nanontany ahy hoe: “afaka miresaka aminao ve izahay azafady” ary nampakany sisiny aho ka nanontaniany karazan-javatra maro. Avy eo, niantso an'i Julie indray izy teo akaiky teo ihany ary nanontaniany toy izay ihany koa. Avy eo mbola nantsoiny indray aho. Avy eo niantso an'i Valerie indray (anisan'ny mpikambana) ary mbola nanontaniany toy izay ihany koa. Ary niverina tany amin'i Julie indray avy eo. Mahavariana tokoa izany.
Ary ny farany….:
Farany, fiara mandeha mafy no manjelanjelatra, misy jiro mipipika sy feon'anjombona, na angamba feon'anjomara. Tanatin'ny fientanentananay, mahita sy maheno zavatra izahay. Mandalo eo anoloanay izany. Mety fiara fandrika angamba izany, hoy ny eritreritro. Indro ny kortezin'ny Filoha no mandalo amin'ny lalana eo amin'ny kianjan'ny tennis izay misy anay miandry eo amin'ny sisin-dalana, fiara kely mahafatifaty no mijanona. Misy olona manokatra ny varavarana, ary indro nivoaka i Kagame.
Ny Filoha Paul Kagame mihazona t-shirt momba ny Art de Conservation. Sarin'i SavyKenya
Nilaza taminy izy fa izy ilay ni-tweet taminy:
Julie no voalohany niarahaba azy sy nampahafantatra ny tenany. Avy eo noraisiko ny tanany. Taorian'izany dia nandray tanana ny tsirairay koa izy, ary nijery manokana ireo ankizy kely tao. Miresaka amin'ny Mpanazatra Tony izy. Milaza izy fa manana fanomezana ho anay ka nanolotra valopy. Nisaotra azy izahay ary nitehaka ho azy. Tsaroanay ilay t-shirt nampanantenainay azy, nomenay azy izany, ka noraisiny ary niteny izy hoe “misaotra anareo, antonona ahy ity.” Tsy mbola faly toy izany izahay tamin'io fotoana io!
Nisy fijanona kely nandritra ny resaka sy ny zavatra natao, ary nanararaotra nanambara azy aho fa izaho no ni-tweet taminy. Nitodika tamin'ireo olona sasany manodidina azy izy ary niteny hoe, “izy no nanasa ahy.” Avy eo, nilaza taminy aho fa tsy ho ela dia handeha hiverina an'i Kenia, ary namaly izy hoe tsia, tokony mijanona ianao. Niteny taminy aho fa maniry ny ho lasa Filohan'ny Repoblika EA raha miforona amin'ny taona 2032 izany.
Nanolotra vola ho an'ny Ibirunga Tennis Club izy:
Nanisa ny vola nomen'ny Filoha ho an'ny Ibirunga Tennis sy ny Running Club izahay. Iray tapitrisa vola Roandey (eo amin'ny 2000 USD).
Ny fomba fijerin”i SavyKenya an'i Paul Kagame:
Ny fahitako azy dia olona mahatehotia izy. Amin'izany, tsy manana fanoritsoritana mazava aho. Nanetry tena tamiko izy, tamintsika rehetra. Malala-tanana sy mahalala fomba. Lehilahy mahafinaritra .
Bilaogera Kenyana hafa, Tech Mtaa, nilaza, “Ity no fihetsika lehibe nataon'ny Filoha ary hahazo fanohanana maro amin'ireo tanora mpitia techno izy”
Ny fihetseham-pon'ny mpamaky tao amin'ny bilaogin'i SavyKenya blog:
Nilaza i Mrembo:
Lazima noheverinay ho siokan-doka [Tweetup viral] ity vaovao ity ….yani firy ny olona mi-tweet amin'ny Filoha ary iny andro iny ihany dia miseho ilay Filoha. Aparitaho ny vaovao. Ny tsara ho anao
Nilaza i Kbaab:
Izany no zavatra MAHAFINARITRA indrindra tamin'ny tweep izay mbola tsy nisy nanao! Tsy mino ianao fa tena mientanentana tanteraka aho. Nankasitraka ny Filoha Paul Kagame foana aho, fa ankehitriny dia tena tiako izy. Toy ny fihetsika tsara sy feno fanetre-tena izany. Mipetraka eto aho, mieritreritra, mba hanao toy izany koa ve ny Filohanay? Marina tokoa? Tsy izay no izy. Fahefana ho anao ry vehivavy! Ity no twwep lehibe, resaka Filoha.
Nilaza i Jacquendinda:
Lehibe izany!!! amin'ny tweet nanjary lasa zavatra lehibe..uuuwi! tsy mino aho fa nihinana hio usiku…mientanentana!!!
Tiako i Kagame satria namaly tweets.. milaza zavatra betsaka amin'ny olona izany, indrindra ireo izay mpitarika….
Mendrika arahabaina izany…nanao ny tsara ianao!!
Nilaza i OtienoHongo:
Taorian'ny namakiako ity, dia nandeha ni-tweet an'i Obama aho !Na izany aza, tsara ny mahafantatra fa mandrindra ny kaontin'ny amin'ny Twitter izy ankehitriny, mahafantatra olo-panjakana manana lefitra manao ny asany toy izao aho – izay midika fa hi-tweet aminy amim-pahatokisana izahay sady mahafantatra fa hovakiany izany. Mahafinaritra ny mahafantatra fa fa ankafizinao ny fijanonanao eto Roandà!